တရားစွဲဆိုမှုကနေပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလွန် Trust မှစီရင်ပိုင်ခွင့်
ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလွန် Trust မှစီရင်ပိုင်ခွင့်
ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ယူမှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ယူမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာတစ်ဦးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးနီးပါးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်နိုင်သောတရားစွဲဆိုမှုတောင်းဆိုမှုများရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအဖြစ် High-တာဝန်ယူမှုနယ်ပယ်များတွင် Practitioner ပို. အန္တရာယ်မှာရှိပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးဥပဒေရေးရာ tools များထဲကတစ်ခုဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့ပါပြီ။ ထို့အပွငျအမှုဥပဒထပ်တလဲလဲကမ်းလွန်ကိုး စား. သူတို့၏ပြည်တွင်းအများထက်ပိုပြီးထိရောက်ဖြစ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ကျနော်တို့ကမ်းလွန်မယ်များအတွက်အကြောင်းပြချက်, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. ၏ function ကိုဆွေးနွေးရန်နှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်။
တစ်ခုကပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း Trust မှမည်သို့အလုပ်လုပ်ပါသလား
ကျနော်တို့ကဒီမှာဆွေးနွေးပါပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. အမျိုးအစားဘယ်သို့ Self-အခြေချ spendthrift ကိုးစားဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးဘယ်သို့ယုံကြည်မှုကိုတစ်ဦး settlor အဆိုပါ settlor နှင့် / သို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများနှင့်ဂေါပကများအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမပါဘဲပြုပြင်မွမ်းမံသို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ခြင်းမနိုင်ထားတဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပညာပိုင်းစကားပြော, ယုံကြည်မှု၏ settlor ယုံကြည်မှုကိုထဲတွင်နေရာပိုင်ဆိုင်မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုမှ၎င်းတို့၏ဥပဒေရေးရာညာဘက်ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ တစ်ဦးက Self-အခြေချခိုလှုံ settlor တစ်ဦးယုံကြည်မှုအကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ်ပြုမူရသောတစ်ဦးယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုကို၏ settlor အဆိုပါဂေါပက၏လက်သို့ယုံကြည်မှုကိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်နေရာ။ အချို့သောတရားစီရင်မှုမှာ settlor တစ် Co-ဂေါပကအဖြစ်ပြုမူလိမ့်မည်။ ရလဒ်အတိုင်း, တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ် မူတည်. အဆိုပါ settlor အကျိုးခံစားရစေပိုင်ဆိုင်မှု၏ဖြန့်ဝေကျော်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်ဒီဂရီရှိပါတယ်။
ဒါဟာဂေါပကအဆိုပါ settlor စေဖြန့်ဝေထိန်းချုပ်ထားအလွန်အရေးကြီးသည်။ အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်လွတ်လပ်စွာတရားရုံးအကြွေးသူတို့ကိုဖြန့်ဝေရန်သူသို့မဟုတ်သူမ၏လက်ကိုအတင်းနိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြန့်ဝေနိုင်ပါလျှင်ဤအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ယုံကြည်မှုကိုပါဝါ၏ဤကန့်သတ်၏ရလဒ်အဖြစ်အကြွေးကနေယုံကြည်မှုတှငျကငျြးပခဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု shields ။ အဆိုပါ settlor နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများသူတို့ကိုယ်သူတို့မှဖြန့်ဝေမထိနျးခြုပျနိုငျကတည်းကတရားရုံးအလွယ်တကူအခြားသူများအားဖြန့်ဝေပါစေခြင်းငှါသူတို့အတင်းလို့မရပါဘူး။
ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. ပူဇော်ရသောတရားစီရင်မှု၏နံပါတ်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြည်တွင်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. အခြေချထိုအကိုး စား. ခေါ်ပါ။ အိမ်တွင်းပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. သည်လက်ရှိတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ 17 ပြည်နယ်များအတွက်ခွင့်ပြုထားပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောကွတ်ကျွန်းစုများနှင့်နေးဗစ်မှာတည်ရှိပါတယ်ရှိသူများအဖြစ်ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. , ပြည်တွင်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. သူတို့ကိုဦးစားပေးမည်လုပ်ရာအကျိုးခံစားခွင့်များစွာပေး။ ကျနော်တို့အဘယ်ကြောင့်အောက်ကအကြောင်းပြချက်ဆွေးနွေးပါ။
အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးကမ်းလွန် Trust မှ Up ကိုသတ်မှတ်မည်လား?
ထိပ်ကမ်းလွန်တရားစီရင်မှု၏အတော်များများကပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. အားဖြင့်ရရှိသည့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထောကျပံ့ဖို့အစေခံထားတဲ့ဥပဒေများရှိသည်။ အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးဥပဒေရေးရာ tools များထဲကတစ်ခုကိုးစားစေ:
အများအပြားအဆင်သင့်ကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုများတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. များ၏အခြေချပုဂ္ဂလိကကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဤအတရားစီရင်မှုများတွင်ယုံကြည်မှုကိုသူ့ဟာသူနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အခြေချများ၏အမည်များလူသိရှင်ကြားမှတျတမျးတငျထားကြသည်မဟုတ်။ အဆိုပါယုံကြည်မှု၏အမည်, Trustees '' အမည်များနှင့်ယုံကြည်မှုကိုလုပ်ရပ်များ၏ရက်စွဲကိုမှတ်ပုံတင်နေကြတယ်။ ဤအတရားစီရင်မှုအတွက်မှတ်တမ်းအများပြည်သူပွင့်လင်းမရှိကြပေ။ တဦးတည်းမှတ်တမ်းများကြည့်ရှုမီ, ထိုကဲ့သို့သောလိမ်လည်မှုလွှဲပြောင်းအဖြစ်တရားဝင်ပြောဆိုချက်ကိုများအတွက်ဒေသခံတစ်ဦးတရားရုံးတွင်အမိန့်ရယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာရေး privacy ကိုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်အရေးပါသောပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာ၏ ostentatious display ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုအကြွေးသို့မဟုတ်လွယ်ကူသောလုယူရာဥစ္စာအဖြစ်သင်ကြည့်ပိုက်ဆံ-ဆာလောင်မွတ်သိပ်တရားစွဲဆိုခြင်းအားလျော့နည်းစေသည်။ အဆုံး၌, သို့သော်, တစ်ဦးတည်းသီးသန့်တည်ရှိမှုအလုံအလောက်မဟုတ်ပါဘူး။ စာရွက်ရုပ်သိမ်းနေသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုတရားစီရင်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာခိုင်မာတဲ့အကာအကွယ်ဥပဒေပြဌာန်းကိုဆက်ကပ်။
နိုင်ငံခြားရေးတရားသဖြင့်စီရင် မှစ. ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုနိုင်ငံခြားတရားရုံးများ၏စီရင်တော်မူအသိအမှတ်မပြုကြဘူး။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုတှငျကငျြးပခဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆန့်ကျင်တောင်းဆိုမှုများစေရန်ဆန္ဒရှိသူများသည်ဒေသခံတရားရုံးစနစ်ကတဆင့်အဲဒီလိုရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏကိုယ်ထိလက်ရောက်တရားရုံးထဲမှာပေါ်လာဖို့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှခရီးသွားပါဝငျသညျ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှု၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုပယ်နိုင်သည့်အနည်းငယ်တောင်းဆိုမှုများများထဲမှတစ်ဦးလိမ်လည်လှည်လွှဲပြောင်းအာဏာရဖြစ်ပါတယ်။ လိမ်လည်လှည်လွှဲပြောင်း, လမ်းနားမှာတစ်အရပ်ဘက်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲတစ်ဦးရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
တစ်ဦးယုံကြည်မှု၏ settlor နှောင့်နှေး knowingly တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြွေးရှင်ဖိနှိပျဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာပိုင်ဆိုင်မှု၏လိမ်လည်မှုလွှဲပြောင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောပြောဆိုချက်ကိုအောင်နှင့်ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်အများအားဖြင့်အကြွေးတားဆီးရန်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, ထိုကဲ့သို့သောကွတ်ကျွန်းစုအဖြစ်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာလိမ်လည်လွှဲပြောင်းအာဏာရရယူနေတဲ့ကြွေးရှင်, နေးဗစ်သို့မဟုတ်ဘေလီဇ်လွယ်ကူသည်ပြုမိထက်က, အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူ။ တကယ်တော့ကျနော်တို့ကမ်းလွန်ကိုး စား. တည်စေသောကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကကြွေးရှင်ကျွန်တော်တို့ဟာငါမြဲဆိုကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုကိုဆန့်ကျင်ရေခြားမြေခြားနေတဲ့ထိုကဲ့သို့သောအာဏာရရယူမြင်ကြဖူးဘူး။
န့်သတ်ချက်များများက Short ညတျတရား
ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုတရားစီရင်မှုယေဘုယျအားဖြင့်အများဆုံးပြည်တွင်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုတရားစီရင်မှုထက်န့်အသတ်များပိုမိုတိုတောင်းအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုဆက်ကပ်။ ထို့အပြင်လိမ်လည်လွှဲပြောင်းတောင်းဆိုမှုများအဘို့သက်သေများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုအတွက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်။ သက်သေများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုကွှေးပေါ်မှာနေရာချနေသည်။ များစွာသောပြည်တွင်းတရားစီရင်မှုတွင်, လိမ်လည်လှည်လွှဲပြောင်းမှုအတွက်သက်သေများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုများတွင်သက်သေများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတစ်ခုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကကြွေးရှင်လူသတ်မှု၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတို့အားထငျရှားစှာဘျောရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်လိမ်လည်လွှဲပြောင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတို့အားထငျရှားစှာဘျောမှသက်သေအထောက်အထားများ၏တူညီသောငွေပမာဏကိုပေးရမညျ။
အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုဥပမာတစျခုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့ထားကြောင်းယုံကြည်မှုကို၏တစ်နှစ်အတွင်းလိမ်လည်လွှဲပြောင်းပြောဆိုချက်ကိုဆောင်ခဲ့ရမည်။ ထို့အပြင်သူတို့အရေးယူများ၏အကြောင်းရင်း၏နှစ်နှစ်အတွင်းကဆောင်ခဲ့ရမည်။ အကြောင်း, တစ်စုံတစ်ဦးကအဆိုပါတရားစွဲဆိုရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကဒီအချိန်အပိုင်းအခြားပြီးနောက်ကွတ်ကျွန်းစုတစ်ဦးလိမ်လည်လှည်စီးအနင်းတရားစွဲဆိုမှုဖိုင်များကိုလျှင်, တရားရုံးများအမှုကိုနားထောငျဖို့ငြင်းဆန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီမှာရှင်းပါတယ်ဖြစ်ကြပါစို့။ တစ်စုံတစ်ဦးကနာရီနဲ့အချိန်မီဖိုင်တွေကိစ္စတွင် beats တောင်မှလျှင်, အတားအဆီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုတစ်ကြွေးရှင်မှယုံကြည်မှုပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးရှုံးတခါမှမတွေ့ဖူးပါဘူးဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အတော်များများအဆင်သင့်တရားစီရင်မှုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုး စား. များအတွက်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကိုပေး။ ဤသည်ကမ်းလွန်ကိုး စား. , အခွန်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများအတွက်ဆွဲဆောင်မှု tool ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါက settlor နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်များတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကကွဲပြားခြားနားသည်။ အမေရိကန်ကလူကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ကောက်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကလူတစ်ဦးအဘို့အယုံကြည်မှုကိုအခွန်-ကြားနေဖြစ်ပါတယ်။ အခွန်မတိုးသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်းရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအတွက်, ယုံကြည်မှုအဖြစ် bulletproof ဖန်ဆောင်ရွက်သည်။ အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုကျည်ဆံတွေကိုထိုးဖောက်ကြပါဘူး။ အလင်းဖန်မှတဆင့်မအဖြစ်သို့သော်အခွန်မှတစ်ဆင့်ထွန်းလင်း။
Settlors အားဖြင့်ထိန်းချုပ်ရေး၏ retention
အကောင်းဆုံးကိုတရားစီရင်မှုအတွက်ကမ်းလွန်ကိုး စား. settlors ယုံကြည်မှုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်၏ကြီးမြတ်သောဘွဲ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အလားအလာဆက်ကပ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့တလမ်းတည်းအနေနဲ့ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုနှင့် တွဲဖက်. အနေနဲ့ကမ်းလွန်ကန့်သတ်ထားတာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုလုံးလုံး LLC ပိုင်ဆိုင်သည်။ LLC သည်ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းတစ်ခုမှာတစ်ဦးသို့မဟုတ်ပိုပြီးဘဏ်သို့လွှဲပြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင့်အသစ်များ၏။ အဆိုပါ settlor ထို့နောက် LLC ၏ကနဦးမန်နေဂျာအမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့သူတို့ယုံကြည်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကုမ္ပဏီ၏နေ့-to-နေ့ကလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ကြသည်။ ဒါကကုမ္ပဏီအားဖြင့်ကျင်းပကြသည်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းလည်းပါဝင်သည်။
တရားပိုင်ဆိုင်မှုကိုခြိမ်းခြောက်သည့်အခါတဦးတည်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမွှေရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ LLC သည်၏စီမံခန့်ခွဲမှု၏တစ်ဦးအပြောင်းအလဲရိုးရှင်းစွာရှိပါသည်။ အဆိုပါဂေါပက LLC သည်၏မန်နေဂျာအဖြစ်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအခန်းကဏ္ဍကြာပါသည်။ ဒါကြောင့်ဒေသခံတရားရုံးများယုံကြည်မှုရန်ပုံငွေပြန်ပို့တောင်းဆိုသောအခါသူတို့ကနိုင်ငံခြားဂေါပကကျော်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှု၌, ငါတို့တရားကုမ္ပဏီကွတ်ကျွန်းစုများသို့မဟုတ်နေးဗစ်ယုံကြည်မှုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်လုပ်ပါ။ အဆိုပါပိုင်ဆိုင်မှုများကိုယုံကြည်မှုကိုပိုင်ဆိုင် LLC သည်၌မတည်။ ဒါကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိလိမ်လည်စီးအနင်း, တစ်ခုသာစီမံခန့်ခွဲမှုပြောင်းလဲမှုရှိပါတယ်။
ဥပဒေရေးရာ Duress စဉ်အတွင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
ကမ်းလွန်ကိုး စား. , ဥပဒေရေးရာ duress အောက်မှာစဉ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ထိရောက်သော tools များရှိနိုင်ပါသည်။ ကမ်းလွန်ကိုး စား. ယုံကြည်မှုကိုအတွင်းကျင်းပပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ဥပဒေနှင့်အကျိုးရှိသောအကျိုးစီးပွားခွဲခြားထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုကို၏ settlor သူတို့ကိုယ်သူတို့မှပိုင်ဆိုင်မှု၏ဖြန့်ဝေမထိန်းချုပ်စေခြင်းငှါကတည်းကကြောင့်အကြွေးထံမှထိုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှု၏ Trustees ယုံကြည်မှုကို၏ settlor ဥပဒေရေးရာ duress အောက်တဲ့အခါကြွေးရှင်သိမ်းယူနိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖြန့်ဝေကနေပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ အဆိုပါဂေါပကသို့သော် settlor ကိုယ်စားဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်စေနိုင်သည်။ သူတို့ကအစ settlor ၏ကိုယ်စားအပေါ်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချမိတ်ဆွေသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးမှပိုင်ဆိုင်မှု၏ဖြန့်ဝေစေနိုင်ပါသည်။
ကျေးဇူးအလျှင်းမပြုဘဲကမ်းလွန်တရားစီရင်မှု၏တစ်ဦးကအရေအတွက်အားအစဉ်အမြဲကိုးစားဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိအုပ်ချုပ်မှုကိုရှိသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကမ်းလွန်ကိုး စား. , အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအဘို့ကြီးသော tools များပါစေ။ ရလဒ်အနေနဲ့ယုံကြည်မှု၏အနာဂတ်အများအပြားစဉ်မြေးဆက်ကိုဖြတ်ပြီးထောက်ခံမှုပေး။ ထို့အပြင်ကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုနိုင်ငံခြားအမွေဥစ္စာကိုဥပဒေများကိုအသိအမှတ်မပြုကြဘူး။
ကွတ်ကျွန်းစု: အဆိုပါအကောင်းဆုံးကမ်းလွန် Trust မှစီရင်ပိုင်ခွင့်
ဒါကြောင့်တစ်ဦးကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုဖြေရှင်းမှကြွလာသည့်အခါတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အရာအားလုံးသည်။ ပထမဦးဆုံးအနနှေငျ့ကိုး စား. သူတို့ထူထောင်ကြသည်ရှိရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ဥပဒေများမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်းဥပဒေများနှင့်အတူတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုရှေးခယျြဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ ဒုတိယအချက်အနေတဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ဥပဒေများသာသူတို့ကိုပြဋ္ဌာန်းသောအစိုးရအဖြစ်အစွမ်းထက်ဖြစ်ကြသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, တဦးတည်းလည်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအခြေအနေ, အစိုးရတည်ငြိမ်ရေးနှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏စီးပွားရေးကြံ့ခိုင်ရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားရပေမည်။ အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုတည်ငြိမ်သောအစိုးရနှင့်တည်ငြိမ်စီးပွားရေးမှာနှင့်အတူကမ္ဘာပေါ်တွင်အင်အားအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေများကိုပေါင်းစပ်။ ဤအအကြောင်းပြချက်တွေအဘို့, ကွတ်ခ်ကျွန်းစုကျယ်ပြန့်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်။
အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုဟာဝိုင်ယီနှင့်နယူးဇီလန်အကြားတောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာသူတို့ဘွဲ့နာမကိုလက်ခံရရှိဘယ်လိုဖြစ်သည့် 1770 အတွက်ဗိုလ်ကြီးကွတ်ကနေသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရကြောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစု 1888 အတွက်ဗြိတိန်အစောငျ့အဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်း၏အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု 1900 အတွက်နယူးဇီလန်မှလွန်ခဲ့သညျ။ အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစု Self-အုပ်ချုပ် 1985 ကတည်းကခဲ့ကြပြီ။ ကွတ်ကျွန်းစုများအခမဲ့အသင်းအဖွဲ့အောက်မှာနယူးဇီလန်တစ်ခုဆက်စပ်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုနီးပါးအမေရိကန် $ 300 သန်း၏တစ်ဦးဂျီဒီပီရှိသည်။ ဒီဂျီဒီပီ၏အကြောင်း 8% နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနှင့်ယုံကြည်မှုကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုတွင်အကြီးဆုံးကဏ္ဍခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်နိုင်ငံ၏လှပသောကမ်းခြေများနှင့်တက်ကြွယဉ်ကျေးမှု၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ 15 သီးခြားကျွန်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ သူတို့ကအကြမ်းအားဖြင့် 92 စတုရန်းမိုင်တစ်မြေဧရိယာတက်ပါစေ။
ကွတ်ကျွန်းစု Trust မှကောင်းကျိုးများ
သည်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုတရားစီရင်မှုကျော်ကွတ်ကျွန်းစုများရှိကြောင်းအကြီးမြတ်ဆုံးအားသာချက်တစ်ခုမှာဥပဒေရေးရာထုံးတမ်းစဉ်လာပါပဲ။ ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေများကိုသာဒေသခံတရားရုံးများကသူတို့ကိုထောက်လျှင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရှင်းစွာအတရားရုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေများကိုထောက်လိမ့်မည်ဟုယူဆအန္တရာယ်များတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ များစွာသောပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးယုံကြည်မှုကိုတရားစီရင်မှု, အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အတူအထူးသဖြင့်ပြည်တွင်းတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုမဥပဒေရေးရာထုံးတမ်းစဉ်လာလည်းရှိ၏။
ဥပဒေရေးရာထုံးတမ်းစဉ်လာပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေရေးရာ duress ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်ဟုသေချာစေရန်အလို့ငှာလုံးဝမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ အဆိုပါ ကွတ်ကျွန်းစုယုံကြည်မှု ကမ်ဘာပျေါတှငျမဆိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိစ္စတွင်ဥပဒသမိုင်းရှိပါတယ်။ စာသားပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ပတ်သက်. ရောဂါဖြစ်ပွားမှုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကွတ်ကျွန်းစုတရားရုံးများတွင်ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ အချိန်နှင့်အချိန်ကိုတဖန်ဤတရားရုံး settlor ကိုယ်စားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်၏မျက်နှာသာအတွက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်အဖြစ်ကွတ်ကျွန်းစုများပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. ၏ settlors ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအကြွေးထဲကနေကာကှယျပါလိမ့်မည်စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရွေးချယ်တဲ့အခါဂုဏ်သတင်းသည်လည်းအရေးပါသည်။ တချို့ကကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုတရားစီရင်မှုအခွန်ရှောင်ဖို့နိုင်ငံစုံကော်ပိုရေးရှင်းများကအသုံးပြုလျက်ရှိများအတွက်လုံခြုံရေးအောက်မှာလဲသေကြပြီ။ တောင်မှပိုဆိုးအချို့သောတရားစီရင်မှုအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုများ၏ရံပုံငွေအတွက်သို့မဟုတ်ငွေကြေးခဝါချမှုအသုံးပြုချိတ်ဆက်ပြီ။ အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုဒီစိစစ်မှလွတ်မြောက်ရန်စီမံခန့်ခွဲပါပြီ။ အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုများပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. ၏ settlors တရားဝင်၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ကိုမဆိုမြိန်ဘဏ္ဍာရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်၏အသွင်အပြင်ကိုမရဘဲအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုး စား. အကြွေးများနှင့် liabilities ထံမှပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါအကြောင်းပြချက်များအဘို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကွတ်ကျွန်းစုများတွင်အခြေချကာကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းပြသထားတယ်။